30kii maalmood ee aan xaaskayga xambaaray – Qaybta 2 | Somaliska
Maanta waxaan qaadaneynaa qeybtii 2-aad ee sheekadii xiisaha badneyn “30kii maalmood ee aan xaaskayga xambaaray” Qeybtii hore waxaad ka akhrisan kartaa halkaan. Osman ayaa sheekadii meeshii aan ku dhaafay nooga sii wadaya.
Subaxii xili hore ayaan hurdada ka toosay oo waxaan u fariistay in aan qoro heshiis furiin aniga oo dareemaya dambi in aan galay. Waxaan isku dayay in aan u qurxiyo heshiiska aniga oo ku qoray in ay la wareegeyso gurigeena, 30% shirkadayda in ay qeyb ku leedahay iyo in ay qaadato baabuurkeena. Markii aan u dhiibay ayay isha marisay ka dibna labo cad u kala jartay. Ma fahmin waxa dheeriga ah ee ay dooneyso, xaaskeyga 10-ka sano aan wada joognay ayaa mudo gaaban noqotay qof aanan garaneyn.
Waxaan dareemay xumaan oo waxaan ka xumaaday waqtiga aan ka lumiyay, enerjiga ay ku bixisay dhisida gurigeena iyo kobcinta wiilkeena balse lama noqon karo go’aankeyga, isla markaana jaceylka aan u qaaday Deeqo waa mid qiimihiisa leh.
Markii aan kala aamusneyn mudo habeen iyo maalin ayay ugu dambeyntii oohin ku dhufatay oo saaid u ilmaysay, waxa aan sugaayay midaas ayay ahayd. Waan la yaabay markii ay hadalka furiinka si degan u qaadatay oo xitaa waxaan mooday in aysan i fahmin. Markii ay ilmaysay oo calaacashay waxaan dareemay in oof layga siibay. Waxaa xoogyeeshay go’aankeygii furiinka oo hada wayba iga go’eyn. Subaxaas shaqadeydii ayaan iska aaday oo maalintaas wixii guriga ka dhacay waxaa i ilowsiisay Deeqo oo shaqada aan ka maqnaan.
Habeenkii aad ayaan u soo daahay oo xili dambey ayaan guriga imid. Waxaan filaayay in ay seexatay xiligaas balse yaabkeyga waxay fadhisaa miiska oo waxay qoreysaa warqad. Sidaa uma daneyn oo xitaa ma salaamin oo aniga oo aan casho cunin ayaan sariirta toos u abaaray, isla markiiba hurto ayaan la dhacay. Hurdo iyo riyo ayaan iska galay madaxeyga waxaa ka dhex muuqda Deeqo oo keliya. Habeenkii sakhdhexe ayaan suuliga u soo kacay mise wali way fadhidaa oo warqadii ayay qoraysaa. Ma aanan wada hadlin ee sariirta ayaan ku laabtay hurdadii ayaan sii dheereystay.
Subaxii markii aan soo kacay ayay ii dhiibtay warqadii oo ay markaas dhamaysay. Waxay ku qortay in aysan waxba iiga baahneyn sida guri, sheer iyo baabuur intaba. Waxay codsatay 1 bil oo aan si caadi ah u wada noolaano. Bishaas waxay codsatay in uusan dareemin wiilkeena in wax is badaleen. Sababteeda waxay ahayd mid la fahmi karo maadaama uu wiilkeena imtixaano leeyahay bishaas oo ma aysan rabin in ay ku furto jahwareer. Arintaas waxay iila muuqatay mid la aqbali karo.
Balse waxay wadatay hal codsi oo dheeri ah, waxay i waydiisay in aan xasuusto sidaa aan u xambaari jiray xiligii todobada aan ku jirnay arooskeenii. Waxay dalbatay in sidaas oo kale aan subax kasta ka xambaaro sariirta oo aan geeyo irada guriga. Waxaan isdhahay amaysan caadi ahayn balse si aan isku dhaafiyo waan aqbalay dalabkeeda inkastoo uu iila muuqday caruurnimo.
La soco qeybta 3-aad
Wasiirka dhaqanka Sweden oo cunsuriyadii ugu weyneyd lugaha la gashay [Video]
“Soomaalida ayaa ugu tiro yar dadka xabsiga ku jira”
asc waan idin salaamay dhamaan bahad somaliska.com waan mahadsantihiin walaal sheekadan waa macantay ee hanag kala jarinina soona dadajiya adinkoo mahadsan
December 30, 2011 at 21:52
walaal shekadaan wey macantahay noo siiwada wan ka helnay iskuna xijiya aad bey u xiisa badantahay
waw waa sheeka macan plz hanaga kala goy nina
December 30, 2011 at 22:54
Waa sheeko qisa macaan wadata waadna ku mahadsan tihiin. Waxaanba ka helay sidey hooyadani u tahay mid aqli badan ayna u diidan tahay in wiilkeedu fahmo oo uu ku niyad jabo waxa ka dhex taagan iyada iyo odeygeeda, mustaqbalka canugeedana uga fekertey maasha Allah. Waa arrin ku dayasho mudan xaqiiqdii.
Halkaa kasii wada sheekooyinka qiima badan sida midaan.
Gabdho….hadaan sheekada la idiin yar yareen oo la kala jarin….ma idinkaaaba soo noqonaya…..:-P
January 2, 2012 at 00:46
Beriba soo saara qebta 3aad please?
January 3, 2012 at 15:36
asxaabta waxaan idiin weydiiyaa sheekadaan week-gii marke miyee soo saaraan mise waqti malahan mar un ayaa lagu soo tuuraa?!
January 3, 2012 at 16:38
asc jimcaale waxaan ka codsanaynaa in aad sheekada isku xijisid mahadsanid
Khamiista ayaan soo daabacayaa qayb kasta.
asc jimcaale walaal shekadaan aad ayaay umacaantahay noso dhameystir qofkii sheeko dhab ah haayo sidee ayuu nigu soo diri kara walaal aniga qisio igu dhacday ayaan haya